Sinoa taratasy fanamboarana sy orinasa | JAHOO
Famaritana momba ny vokatra Item Size Dimension Material Package Case Size in (cm) Popcorn & Fried Chicken Paper Bucket 32oz 11.6 * 8.9 * 14.5 230g + 18pe 10pks * 50pcs 60 * 25 * 57 46oz 12.0 * 8.9 * 17.7 230g + 18pe 10pks * 50pcs 62 * 26 * 59 64oz （fohy & matavy） 16.7 * 13 * 13.7 ...
Raharaha amin'ny (cm)
Paoketra am-paosy sy paosy akoho nendasina
8.9 11.6 * * 14,5
64oz (fohy & matavy)
64oz (lava & manify)
14.4 17.8 * * 16
18.5 * * 20.3 14,5
350 + PE tokana
22 * 21.4 16.3 *
Boaty akoho nendasina. Tavoahangy taratasy azo ariana. Ho an'ny fitaterana sy fanolorana akoho nendasina sy sakafo mafana hafa. Taratasy voatsabo ho fanoherana ny fidiran'ny menaka sy ny fivoahana.
Mety ho sakafo preservative na sakafo vaovao izany, rehefa mila mivarotra na mitatitra sakafo ianao na milaza raha te-hanome serivisy fanaterana trano ho an'ny sakafo ianao dia mety ho mora ampiasaina ny fonosana taratasy.
Ny fonosana vita amin'ny sakafo vita amin'ny taratasy dia mety indrindra amin'ny fikarakarana sy vokatra ho an'ny mpanjifa eny an-tsena.
Miaraka amin'ny haitao farany ananantsika, ny fonosana taratasy dia nanjary fanalahidin'ny fitehirizana sy fivarotana vokatra fihinana eny an-tsena amin'ny fahakinganana tsy tapaka. Iray amin'ireo antony lehibe tsy tokony hivadihana ao an-tsaina rehefa mivarotra zavatra mora tohina toy ny sakafo dia ny miantoka fa tsy miovaova ny kalitaony ary manampy amin'ny famonosana taratasy amin'ny ambaratonga sakafo.
Betsaka ny fangatahana an'ity karazana fonosana ity amin'ny indostrian'ny sakafo.
Orinasa lehibe marobe no miankina amin'ny indostrian'ny fonosana hanomezana fonosana sahaza ny vokariny.
Previous: kitapo taratasy
Sakafo fifadian-kanina vita amin'ny akoho amam-borona malaza ...